Chikumbiro chemupiro | Ota Ward Tsika Yokusimudzira Sangano
-Kutsigirwa kubva kumunhu wese kunotsigira hunyanzvi hwetsika yeOta Ward uye zvinotungamira mukugadzirwa kwedhorobha rine hunhu-
Ota Ward Cultural Promotion Association iri kuita zvirongwa zvakasiyana zvekusimudzira Ota Ward uye kugadzirwa kweguta rine tsika nemagariro.
Tichashandisa iyo mipiro yatinogashira kuitira kuti vanhu vazhinji vagone kugadzira mikana yekusangana netsika neunyanzvi.
Naizvozvo, tinokumbira rutsigiro rwako nerutsigiro kuitira chinangwa chezviitiko zvedu.
Toshiaki Uejo, Mutungamiri, Ota Ward Tsika Yokusimudzira Sangano
Chokutanga pane zvose, tapota taura nesu.Isu tinokuzivisa iwe nezve maitiro.
Mabhizinesi parizvino ari kutsvaga rutsigiro
Parizvino, tiri kutsvaga rutsigiro muzvirongwa zvinotevera.
Fomu yekunyorera yemupiro
Mipiro kusangano redu inokodzera mitero inokurudzirwa.Kudzoserwa kwekupedzisira mutero kunodiwa kuti uwane kurapwa kwakasarudzikaUye zvakare, kana uchinyora yekupedzisira mutero kudzoka, "Chitupa Chekutambira Chipo" chakapihwa neChita chinodiwa.
Iwe unogona kusarudza kugamuchira kubviswa kwechipo sekubvisirwa mari kana kubvisirwa kwakakosha semutero chikwereti, chero ipi iri nani.Kuti uwane rumwe ruzivo, ndapota tarisa kune webhusaiti yeNTA.
Iwe unogona kuve unokodzera iwe wega pekugara mutero uye nhaka yemitero inobviswa.Mutero wekugara wega unobatwa zvakasiyana zvichienderana newadhi, guta, dhorobha, uye musha, saka ndokumbira utarise kuwadhi yako, guta, guta, kana musha kuti uwane ruzivo.
National Mutero Agency peji rekutanga
Iwe unogona kubvisa kubvisa kwacho kwakasiyana nemupiro mukuru.Kuti uwane rumwe ruzivo, ndapota tarisa kune webhusaiti yeNTA.